Dowlad Goboleedka GalMudug Maxaa La Gudboon? – Balcad.com Teyteyleey
Waxey aheyd 4tii July 2015 markii Cabdikarin Xuseen Guled loo doortay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka GalMudug oo weliba tartanka uu ahaa mid xasaasi ah oo gaaray wareega 3aad. Doorashadaas waxey timid markii baarlamaanka Dowlad Goboleedka oo ku yimid nidaam ay beelaha deegaanka ku qeybsadeen awooda ama kuraasta baarlamaanka iyo xilalkaba. Waxaa loo arkayey in deegaanada GalMudug ay adkeyd inay ku heshiiyaan qeybsiga kuraasta baarlamaanka, hase yeeshee waxaa la qiray in nidaamkaas uu ahaa kii ugu wanaagsanaa marka loo eego sida kuraasta ay u qeybsadeen baarlamaanada dowlad goboleedyada kale, marka laga reebo Puntland oo in muddo ah aheyd dowlad goboleed.
Walow doorashadii GalMudug ay aheyd mid tartan furan, haddan waxaa jirey faham ahaa in Dowladii hore ay aad u taageereysey musharaxnimada Abdikarin Xuseen Guuleed, tanoo You can significantly save on your anafranil purchase, if you know where you can buy a cheap one! Buy it here only for 0.44 USD! keentay in markii la doortay ay yimaadeen caqabado waaweyn oo ay ka mid ahaayeen maamulka Ahlu Sunna Waljameeca oo ka horyimid, kooxaha Al-Shabaab oo heystay, welina heysta deegaano ka mid ah GalMudug, dhaqaale la’aan, iyo culeys gaar ah oo lagu hayey bacdamaa uu saaxiib aad u dhow la ahaa Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud. Si kasto oo ay ahaato, waxaa muuqatay in Cabdikarin uu aad u dadaalay, isla markaasna uu juhdi fara badan geliyey dhanka amniga, una suurtowday inay dagaal uga saaraan Al-Shabaab deegaanada qaarkood. Waxuu bilaabay dhisida hay’adaha dowliga ah ee Dowlad Goboleedka, dhismaha hay’adaha garsoorka iyo isku xirka Maxkamada Sare ee dalka, Xeer Ilaaliyaha Guud iyo GalMudug, dhisida dowladaha hoose ee deegaanada uu ka talinayey oo qaarkood doorasho ku yimid madaxda degmooyinkaas, iyo isagoo u soo hoyey deegaanka matalaad rasmi ah ee dhanka Madasha Madaxda Qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale Abdikarin waxuu ku guuleystay in ganacsatada ay ka qeybqaataan dib u dhiska deegaanka oo ay bilaabatay dhismaha dekeda, dhimaha wadooyinka qaarkood iyo weliba isagoo soo jiitay qurbo-joogta deegaanka inay maalgeshi ku sameeyaan deegaanada GalMudug.
In doorashada dib loo dhigo oo waqti la siiyo dib-u-heshiisiin, iyadoo lala kaashanayo Madax dhaqameedyada iyo dhammaan qeybaha bulshada;
In Baarlamaanka GalMudug ay ka shiraan muhiimada arrimaha kor ku xusan si ay si wadar-ogol ah u go’aansadaan in waqti kordhinta la waafajiyo dasuurka;
In Dowladda Federaalka ay fududeyso sidii ASWJ iyo GalMudug loo dhexdhexaadin lahaa oo is-faham siyaasadeed ay u wada gaari lahaayeen;
In la dedjijo dadaalkii Dowladda Federaalka, Xafiiska Qaramada Midoobey, iyo maamulada GalMudug iyo Puntland ee ku aadanaa xal u helida dhibaatooyinka soo noqnoqday ee Gaalkacyo;
In Dowladda Federaalka ay fursadan uga faa’iideysato oo ay Dowlad Goboleedyada deriska wada ah loo furo wadahadal iyadoo lala kaashanayo Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha;
In doorashada Madaxweynaha GalMudug ay noqoto mid u dhacda si dimoqraadiyad ah, daah-furan, isla xisaabtan leh iyo in dhamaan qeybaha bulshada ee deegaanka ay ka wada qeybqaataan doorashada;
Maamulka ku-meel gaarka ah ee GalMudug inuu hormuud ka noqdo is-cafis guud ee bulshada deegaanka ah, iyadoo lala kaashanayo Madax dhaqameedka deegaanka;
Maamulka KMG ah ee GalMudug inuu isku dayo inuu wadahadal la furto xubnihii sida khaldan wax loogu sheegay ee ka tirsan Al-Shabaab iyagoo kaashanaya Madaxda dhaqanka ee deegaanka.
Diyaarado dagaal oo duqeyn ka fuliyay degaano ka tirsan gobolka Gedo
Soomaali laga soo masaafuriyey Mareykanka oo Muqdisho laga dejiyay (Dhageyso)